मानिसजातिको इतिहास हामीलाई मानिसहरूलाई ग्रह को पूर्ण मालिक महसुस गर्न अनुमति जो ठूलो आविष्कारहरू, पूर्ण छ ... अणु को विभाजन र collider सिर्जना ब्रह्माण्डको को अज्ञात चुचुराहरूको थाहा मानसिक बल र असीम समर्पण होमो Sapiens को सूचक एक प्रकारको छन्। निकोला Tesla आफ्नो वैज्ञानिक गतिविधि साँच्चै उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको अविश्वसनीय willpower गर्न बिजुली, आफ्नो हात र धन्यवाद "रत्तीएको" गर्न चाहने। मान्छे मात्र केही सर्बियन् आविष्कार हकदार, ठूलो भौतिक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग आज हाम्रो लागि काम गर्दछ "एक रहस्य हो।"
आफ्नै हातले बिजुली
- अक्सर आउने भवन तत्व बाहिर एक Blown फ्यूज (यातायात काउन्टर मा): कारण मानवता को बलियो आधा जीवन परिस्थितिअनुसार एकदम अक्सर ऊर्जा र सम्पत्ति को चिन्ता सीधै सम्बन्धित छन् मुद्दाहरू सामना गर्न छ। शायद हरेक मानिस कहिल्यै हामी धेरै लागि आउटलेट विस्थापन वा स्विच, आफ्नो हात संग "tenacious" बिजुली महसुस गर्न सक्षम छ। स्कूल बच्चाहरु देखि भोल्टेज र सजग बन्न एम्पीयरेज विशेष गरी "जीवन" विद्युत उपकरण वहन र मान्छे आफ्नै घरमा महसुस गर्न अनुमति दिन्छ कि सहज र पूर्ण सुरक्षित छ ऊर्जा को यस्तो प्रकार उचित आदर देखाउँछ नगर्ने व्यक्ति लागि, कहिलेकाहीं खतरनाक tandem छन्। को "गर्मी र अन्य प्रकाश" मा अक्सर अप छ आफ्नै thoughtlessness र मूर्ख fearlessness लागि भारी मूल्य तिर्ने निष्ठूर हत्यारा, "Provocateur" wakes।
वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतहरू
त्यहाँ, जो को क्षमता प्रकार र समारोह निर्भर हुनेछ स्थापना erecting एक व्यक्ति वातावरण बिजुली लागि बिल्कुल अहानिकारक प्राप्त गर्न सक्छन् जो तरिका, आफ्नो हातमा छन्। यो ई-मेल प्राप्त को प्रक्रिया recreating, उल्लेख पर्छ भनेर केही अडान-एक्लै स्टेशन। बिजुली - वर्तमान, सबै उपकरणहरूमा परिचित को उपयोग शामिल छ। र उत्पन्न बिजुली एसी वा डीसी प्रकार या त हुन सक्छ। यो सबै मुख्य, स्थापना को संरचनात्मक सुविधाहरू मा, निर्भर गर्दछ। का जो एक व्यक्तिले आफ्नो हातमा घर Electrified गर्न सकिन्छ प्रयोग आधारभूत प्राविधिक तरिका, हेरौं, मुक्त बिजुली को कार्यान्वयन प्रबन्धको वास्तविक परिणाम हुनेछैन। यस उपकरण प्रयोग र सञ्चालन सम्बन्धित आर्थिक पक्षलाई विचार गर्नुहोस्।
यसरी, हावा टरबाइन
पवन टर्बाइन समय एकदम लामो अवधिको लागि मानिसहरूले प्रयोग गरिन्छ। यस मामला मा, सम्भावित downstream र updraft विद्युत ऊर्जा मा यांत्रिक ऊर्जा देखि "परिवर्तित"। यो सेटिङ साथ सुसज्जित जो ब्लेड, प्राकृतिक घटना र मानव आवश्यकता बीच मध्यस्थ एक प्रकारको छन्। हावा शक्ति बारी मा एक बिजुली वर्तमान उत्पादन जो एक बिजुली ड्राइव। मिति, सरकारको यस्तो उपकरणहरू प्रयोग निषेधित छैन। मात्र प्रतिबन्ध भन्दा बढी छैन जो पर्छ2किलोवाट / घन्टा शक्ति, हुन सक्छ। हावा टरबाइन मर्मतका को सापेक्षिक nedorogoviznoy र व्यावहारिक मूल्य साथ यो गाह्रो छ, र परिणाम एक वैकल्पिक बिजुली छ। संरचनात्मक बल र सुरक्षा प्रदर्शन: हातमा दुई महत्त्वपूर्ण प्राविधिक गुणहरू हुनुपर्छ जो स्थापना निर्माण। एउटा महत्त्वपूर्ण कारक एक हावा टरबाइन को सम्भाव्यता favoring को वस्तुहरु को स्थापना को लागि सबै भन्दा अनुकूल स्थान चयन प्रक्रिया हुनेछ। त्यो हावा को प्रवाह, यो unhindered उपलब्धि (बिजुली ब्लेड) को लागि केही अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक छ, यस्तो प्राकृतिक घटना हो। तसर्थ, स्थापना को स्थिति बस optimally खुले देश को समय मिलेन बाध्य छ: यो एक क्षेत्र वा एक भवन संरचना को एक छत हुनुपर्छ।
उत्पादन गर्न सबैभन्दा प्रभावकारी क्षमता विद्युत ऊर्जा यस्तो प्रतिष्ठानहरु को दक्षता को स्तर 14% छ wherein, सौर कक्षहरू छ। आधुनिक प्रणाली यो प्रविधिको आधारमा विकसित आवश्यक ऊर्जा संग उपभोक्ता प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ। भण्डारण कन्टेनर रूपमा स्वायत्त जटिल थप तत्व वैकल्पिक बनाउन बिजुली आपूर्ति रात वा दिन को वर्षाको समयमा एक सरल सौर पैनल लागि compensating, अटुट। छत सिलिकन प्यानल सुसज्जित, आफ्नै एकदम सम्भव छ आफ्नै हातले। को फोटोन "विस्फोट", मिति द्वारा उत्पादित निःशुल्क बिजुली, यो एक निजी घर को लागि एक उचित वैकल्पिक ऊर्जा विकल्प छलफल गर्न को लागि लागू गर्न सक्दैन। "बन्द मात्रा" यस्तो स्थापना तत्व स्वीकार्यता परे र हाम्रो जनसंख्या को बहुमत लागि लागत देखि वही मुसीबत "राम्रो" छ। यस मामला मा, जस्तै उपकरण को फिर्ती व्यक्त हुन सक्छ सेवा जीवन को 5-7 वर्ष। , मूल्य मा धेरै बेफाइदा बिजुली को बचत गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको भए तापनि हातमा-संगठित undisputed वास्तवमा आफ्नो मालिकहरूको लागि निकट भविष्यमा उपकरणको लाभकारी बन्न।
निःशुल्क सानो बचत
निस्सन्देह, तपाईंले एकदम प्राप्त छैन कुनै मूल्य र खरिद उच्च प्रविधी उपकरण घरमा खपत बिजुली को लागत कम। आफ्नो हात मात्र मोबाइल उपकरणहरू चार्ज लागि वा उत्पादन भोल्टेज एसी पावर को 3-12 वाट देखि भिन्न रूपमा अन्य "कम शक्ति" मा प्रयोग को लागि फिट हुनेछ कि एक साधारण आदिम उपकरण गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्न, तपाईं tokoiskatel (तपाईं एक मल्टीमीटर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ) र प्राथमिकताको तामाको तार लम्बाइ 0.5-2 पु तपाईं के गर्न छ सबै एक "राम्रो" जमीन पाउन छ :. Tsentralnootopitelnoy पाइप वा पाइप सिस्टम हुनुपर्छ। थप rectifier सङ्कलन (डायोड पुल) र, अन्तमा, फेला प्लग मा एक "शून्य"। निःशुल्क बिजुली - आफ्नै हातले बनाएको, र इन्धन बिजुली आवश्यकता छैन। स्वास्थ्य को प्रयोग!
हो, आज "सुशील" सुरक्षित थियो! भविष्यमा नवीन ऊर्जामा को उपयुक्त परिचय मान्छे आणविक, थर्मल, पेट्रोल, डिजेल र ग्याँस टरबाइन शक्ति बिरुवाहरु को प्रयोग त्याग्न गर्न अनुमति दिन्छ। , बिजुली "उत्पादन" सिक्न जसले हातले र आफूलाई पुरानो प्रयोग गरेर नष्ट, तर मानवता गर्न ऊर्जा अत्यावश्यक प्राप्त को "केही" विधिहरू लागि अति लाभदायक मान्छे। यदि समयमै उपाय लिएको हामी अझै पनि subsoil को रिक्तीकरण बाँकी छोडेर धरती मूल उपस्थिति फर्कन र हाम्रो कस्मिक घर वातावरण को विनाशकारी राज्य ल्याइएको पुनर्स्थापना गर्न मद्दत गर्न सक्षम।
को नसीहत लागि
गरौं आशा: मूर्खता लोभ एउटा सीमा छ, र मन जित्न सक्षम हुन्छ। अन्यथा, मानिसजातिको अन्तिम नियमित घातक नतिजा predetermined गरिनेछ। तर, सधैं छ बाहिर तरिका, र शब्द "impasse" प्रतिफलको सम्भावना सुझाव ...
हात द्वारा थर्मोस्टेट कसरी बनाउने। आफ्नै हातले ताप वा जलजीवालय लागि थर्मोस्टेट
माटो बाट जनावर कसरी sculpt गर्न: चरण निर्देशनहरूको द्वारा केही चरण
आफ्नो हातले Composting बक्स
यो अचम्मको बेरी ब्लूबेरी: स्वास्थ्य व्यञ्जनहरु
को जाडो Budli लागि एयर-सुक्खा आश्रय
यो उपयोगी curd भन्दा पहेली समाधान गर्न समय
घरमा घाँटी र चिउँडो लागि अभ्यास
Rhinitis। यो विकृति के हो?
टायर योकोहामा आइस गार्ड IG35: समीक्षा। योकोहामा आइस गार्ड IG35: मूल्यहरु, विनिर्देशों, परीक्षण